WTTC: Safarka iyo Dalxiiska wadada soo kabashada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirka Warka Warshadaha » WTTC: Safarka iyo Dalxiiska wadada soo kabashada
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka kala duwan
WTTC wadada soo kabashada
Maaddaama adduunku bilaabay inuu dib u furmo safarka iyo dalxiiska, shirarka iyo shirarka - shaqsi ahaan, waxaa muhiim ah in la aqoonsado sida marin u helku u bilaabi doono ganacsiga jihada saxda ah.
Bixinta safarka la heli karo waa labadaba mid bulsho iyo fursad ganacsi.
WTTC waxay diyaarisay tilmaamo muhiim ah oo ku saleysan qaabdhismeedka hogaamiyaasha, khubarada, iyo ururada dowlada.
Tilmaamaha waxay raacaan qaab la mid ah Tilmaamaha Heerka Sare & Kala-duwanaanta iyo Tilmaamaha Caafimaadka Maskaxda.
Golaha Safarka & Dalxiiska Adduunka (WTTC) ayaa maanta bilaabay xeerar cusub oo heer sare ah oo loogu talagalay ka mid noqoshada iyo marin u helka waaxda oo diiradda saareysa waayo aragnimada dadka safarka ah ee naafada ah waxayna gacan ka geysan doontaa in waaxda Socdaalka & Dalxiiska laga dhigo meel loo wada dhan yahay.
Tilmaamahan cusub ee muhiimka ah waxaa lagu soo uruuriyay fikrado iyo qaab-dhismeedyo ay soo saareen hoggaamiyeyaasha waaxda gaarka loo leeyahay ee Safarka & Dalxiiska, khubaro xagga socdaalka iyo naafada ah, iyo cilmi baaris ay sameeyeen hay'adaha dowliga ah.
Waxaa loo qeybiyay afar tiir, tilmaamaha waxay raacayaan qaab la mid ah Tilmaamaha Heerka Sare & Kala-duwanaanta iyo Tilmaamaha Caafimaadka Maskaxda ee WTTC ee la sii daayay lixdii bilood ee la soo dhaafay.
Afarta tiir ee muhiimka ah waxaa ka mid ah: